Madaxweynaha: ''Waa in deg-deg loo joojiyaa dagaalka magaalada Gaalkacyo'' * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 On Oct 7, 2016
(Villa Somalia)—mareeg— Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in mar kale sii micno darro ah loo daadiyo dhiiga shacabka magaalada Gaalkacyo, halkaas oo laba kooxood oo iska soo horjeeda ay ku dagaalamayaan.
”Waxaan ku baaqayaa in deg-deg loo joojiyo dagaalka ka socda Gaalkacyo, wixii khilaafaad ee jirana wadahadal lagu dhammeeyo. Soomaaliya uma baahna colaad kale iyo dhiig micno la’aan loo daadiyo” ayuu yiri Madaxweynaha.
“Soomaaliya waxay mareysaa marxalad xasaasi ah oo biseylka dowladnimadeena lagu qiimeynayo, waana nasiib darro in iyadoo la wadahali karo qori caaraddiisa xal lagu raadiyo. Ma aqbali karno in shacabka loo horseedo colaado hor leh oo qaranimadeena burburin kara”.